Iindaba zesiXhosa, ngo11:00, 16 eyomqungu 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, ngo11:00, 16 eyomqungu 2019
Written by Ashia Nkontsa on 16/01/2019
i-DA ihamba naba nempumelelo
Inkokheli yombutho i-DA umnumzana uMmusi Maimane uthi logama ekholelwa ukuba indibanisela yeyona inekamva kwicandelo lezoPolitiko eMzantsi Afrika . U-Maimane uthi owakhe umbutho uzakukhokelwa yimithetho yalo mbutho ngendlela ongachwechwela ngayo intsebenziswano kweminye imibutho emva kolonyulo lukazwelonke kulonyaka oluzakuqhuba kwinyanga ka Meyi. Ukanti urhulumente ngobambiswano phakathi kwe DA ndawonye ne UDM kumasipala ombaxa wase Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni kwajika kwayincidi yekhayala emva nanjengoko oku kwabangela ukuba i-DA iphulukane nesihlalo sika sodolophu ndawonye nolawulo kulaMasipala umbaxa. UMaimane uxelele iCape Town Press Club ukuba i-DA izakungena kurhulumente wentsebenziswano nombutho osebenza kakuhle kwaye abanemigaqo efanayo nalo mbutho uthile.
Iphulo loku khusela abantwana besikolo
Kunyanzeleke ukuba bazimele nangemigqomo abantwana besikolo kumandla iBontiville ukusinida ubom babo .Oku kulandela udubulo oluqhube ngethuba abantwana bebesiya esikolweni izolo kudizwa ukuba kubekho utshintshiselwano lwembumbulu phakathi kwamqela onqevu. Ngokwengxelo ababantwana bebehamba nabo banikela ngexesha labo kwiphulo i-Walking Bus Initiative ngethuba kusebenzeka esisiganeko sodubulo eliphulo liqinisekisa ngokuba abantwana besikolo rhoqo xa besiya na bebuya ezikolweni ukuqinisekisa ukhuseleko labo eliphulo lasekwa ngonyaka ka 2016 ngenjongo zokhuseleko. U-Ceba we Ward eBontiville umnumzana u-Angus Mckenzi uthi amaPolisa aphanda esisiganeko sodubulo nongekaziwa unobangela waso.
i-SAFTU igxininisile ukuba ayibandakanyeki ekonakalisweni kwezinto
Umfela ndawonye emibutho yabasebenzi i-SAFTU uthi uyabaxhasa abaqhankqalazi belizwe lase Zimbabwe kodwa uthi awuluxhasi udushe olukhokelela ekonakalisweni kwezinto oloyanyaniswa nabo bagqushalazela ukuwenyuka kwamaxabiso amafutha ezithuthi kwelalizwe. Sele kubhubhe abantu abasibhozo ngenxa yolugwayimbo kwaye ngamakhulu Khulu abantu abathe babanjwa na njengoko olugwayimbo lungena kusuku lwesithathu namhlanje noluvale mba iinkonzo kulo lonke elizwe lase Zimbabwe. Umongamweli wase Zimbabwe Emmerson Mnangagwa uthi .Ophuma kwi SAFTU u-Patric Craven uthi bayakuxhasa okwenziwa ngabsebenzi kwelalizwe khon’ukuze kwehle amaxabiso entongo yamafutha ezithuthi.Ukanti otitshala abaliqela ndawonye nabanye abasebenzi becandelo loluntu sele bekhuphe ingxelo yokuba nabo bazibandakanyaka nolugwayimbo.
Isikolo King Edward siyaphika ba esisikolo sinobuhlanga
Isikolo samabanga aphakamileyo i- King Edward eMatatiele eMpuma Koloni siyawaphika amabanga okuba esasikolo sinobuhlanga. Ibhodi elawula esasikolo besibambe intlanganiso kubusuku esivuka kubo ukushukuxa lamabango abekwa esisikolo. Oku kulandela ingxelo ezityhola ngocalu-calulo. Kukholeleka ukuba iqela labantwana baka grade R abantsundu babekwa kwigumbi labo lokundela logama abamhlanje benegumbi labo bodwa. Ngaphambili iphepha ndaba i-Sunday Times ladiza ukuba ophuma kwi bhodi yesigqeba esilawula esasikolo sathi oku kwenziwa ngenxa yokuba abantwana abanemiceli mngeni kwizifundo sesingesi esithi ababfundi babekwa bodwa ukunikwa ingqwalasela ekhethekileyo.